Yimalini iindleko zokuMhlophe kwamazinyo eTurkey? Unyango lwaMazinyo kwelinye ilizwe-uCure Booking
Ibhlog yoKhenketho lwezoNyango
Ukutyeba kakhulu kobuntwana
Ukongezwa kwebele (Umsebenzi kaBhoob)
Ukuphakamisa i-Butt eBrazil
Uluhlu lwamaxabiso wamazinyo
Philisa indawo ekuyiwa kuyo
Unyango lwamazinyo Amathumbu ama-Whitening
Yimalini iindleko zokuMhlophe kwamazinyo eTurkey? Unyango lwamazinyo kwelinye ilizwe
7 Juni 2021 7 Juni 2021 incwadi yokubanga
Kubiza malini ukwenza mhlophe amazinyo akho eTurkey?
Ngaphambi kokuba ufumane naluphi na uhlobo lonyango lwamazinyo eTurkey, kuya kufuneka usoloko ubuza ukuba ngaba ungumgqatswa olungileyo. Ke, ukugqibelela umgqatswa wamazinyo amhlophe eTurkey, Kuya kufuneka uhlangane nezinye izinto.
Nangona ukugcoba kwamazinyo e-laser eTurkey yinkqubo esebenzayo, ayisiyo wonke umntu. Ukwenza mhlophe kwamazinyo, umzekelo, kusebenza kuphela kumabala angaphandle (lawo angaphandle kwizinyo), hayi amabala angaphakathi anje ngetetracycline stain, eveliswa kukuvezwa kwesi sithinteli esisesibelekweni.
Musa ukukhohliswa ziikiti ezininzi ezizenzele zona. Amazinyo okwenyani amhlophe afumaneka kuphela kwindawo yamazinyo, kwaye ayikhuthazwa into yokuba uneminye imiba yezempilo yamazinyo, enjengesifo seentsini, kuba inokwenza iintsini namazinyo akho abe novakalelo ngakumbi.
Ukuba uyatshaya iminyaka kwaye unamazinyo neentsini ezibuthathaka, ngekhe ubenguye umgqatswa olungileyo wokumhlophe kwamazinyo eTurkey. Ukuba uzimisele ukuyeka ukutshaya, ungalufumana olu nyango. Nangona kunjalo, ukuba amazinyo akho ahlaselwe kakubi ukuba ungazuzi kwinkqubo yokwenza mhlophe kwamazinyo, ugqirha wamazinyo unokucebisa ezinye iindlela ezinje ngamazinyo okanye veneers eTurkey.
Zeziphi iiNyango eziMhlophe zamazinyo ezikhoyo eTurkey?
Izinto zokuthambisa ezenza mhlophe, umzekelo, ziyafumaneka kwikhawuntara. Nokuba zihlala zisetyenziswa, azinampembelelo mhlophe.
Iikiti zokufaka mhlophe zibonelelwe ngugqirha ukuze zisetyenziselwe ekhaya. Oku kuyasebenza ngokuphakathi kwaye kuya kuwaqaqambisa amazinyo akho kancinci. Uya kudinga ukubonakala kwamazinyo akho, eya kuthi ithunyelwe kwilebhu apho iitreyi ezenziwe ngesiko ezibambe ijeli yombane ziya kubekwa phezu kwamazinyo akho. Abantu abaninzi bakhetha olu nyango njengoncediso kumazinyo amhlophe ukuze kugcinwe amazinyo abo emhlophe ixesha elide.
Kwiofisi yamazinyo kwenziwa mhlophe amazinyo e-laser. Amanqaku, afana neBriteSmile® kunye neZoom! ® ziyafumaneka eTurkey, phakathi kwezinye iinkqubo ezininzi ezaziwayo.
Ngaba amazinyo amhlophe eTurkey yinkqubo esebenzayo yoKhenketho lwamazinyo?
Izigulana ezininzi zamazinyo zifuna unyango phesheya ukonga imali kutyando abangayi kuba nakho ukuhlawula ekhaya. Ngelixa i-laser whitening whitening ayiyi kukugcinela imali eninzi njengezinto zokufakelwa okanye ii-veneers, iya kubiza kakhulu kunokuba inkqubo yenziwe ekhaya.
Esinye isizathu unokukhetha ukuya amazinyo laser mhlophe eTurkey ngelixa useholideyini kungenxa yokuba inkqubo iyakhawuleza. Awuyi kuchitha ixesha lakho elininzi leeholide kuba azikho ziphumo ebezingalindelekanga ezininzi (nangona abanye abantu bexela amazinyo abuthathaka kusuku olunye okanye ezimbini emva konyango, kodwa oku akusosigxina.)
Injani inkqubo yokuLungiswa kwamazinyo eLaser eTurkey?
Inani loTyelelo lwamazinyo: Ixesha le-1
Ixesha lokuMhlophe kwamazinyo: Approx. Iiyure ze2
Ugqirha wamazinyo uza kusebenzisa itshathi yomthunzi ukujonga umbala wamazinyo akho ngaphambi kwenkqubo ukubona ukuba kulula kangakanani emva konyango.
Ukuphelisa itartar kunye nawaphi na amabala abonakalayo, unyango lwakho luya kuqala ngokucoca ngokucokisekileyo amazinyo akho. Kuba ijeli yokuqaba mhlophe kufuneka isetyenziswe emazinyweni kuphela, kuya kubekwa idama lerabha macala onke ukukhusela iintsini nolwimi lwakho. Iimpawu zokukhusela ziya kunxitywa ngamehlo akho ukuzikhusela kwilitha elomeleleyo le-laser.
Ijeli yokuqaba mhlophe ke ibekwa emazinyweni akho, kwaye umqadi we-laser usetyenziselwa ukwenza izinto zibe mhlophe kwijel. Ijeli iyasuswa, kwaye kuxhomekeke kubuchwephesha obusetyenziswa ngugqirha wamazinyo, inkqubo inokuphindaphindwa amaxesha amaninzi. Umzekelo, ezinye iinkqubo zifuna nje isicelo esinye sejel, eshiyekileyo emazinyweni kangangemizuzu engama-45.
Ugqirha wamazinyo uya kucoca amazinyo akho kwakhona ukuphelisa nayiphi na imikhondo yejeli kwaye uya kubamba itshathi yomthunzi emazinyweni akho ukuvavanya ukuba zingaphi izithunzi ezahlukileyo yakuba isuswe yonke ijeli (ukuya kuthi ga kwi-14). Amazinyo akho aya kuba mhlophe ngokubonakalayo nokuba awukhupheli ngaphandle.
Yimalini amazinyo e-Laser Whitening eTurkey kuMhlathi ongasentla naphantsi?
Ixabiso eliqhelekileyo lokugcwala kwamazinyo eTurkey yi- $ 290. Iiklinikhi zethu zamazinyo esizithembileyo ziya kukuhlawulisa i250 £ amazinyo emhlambo aphezulu nasezantsi e-laser enza mhlophe eTurkey. Uyakufumana isiqinisekiso seminyaka emi-5 kulo lonke unyango lwamazinyo olufumanayo oluyinzuzo enkulu ongenakukuphosa.
Ukongeza kwimhlophe yokuqaqamba kwamazinyo e-laser, unokufumana kwakhona ikiti yokuqaqamba ekhaya. Ixabiso lekhithi emhlophe yasekhaya eTurkey yi- $ 150 kuphela. Olu hlobo lonyango, ugqirha wamazinyo uya kufuna ukutyelelwa kabini. Imibono iyathathwa ngexesha lokuqeshwa kwakho okokuqala kwaye ithunyelwe elebhu, apho iitreyi ezilingana namazinyo akho zenziwa khona
Uya kuthatha iitreyi kunye nejeli yokuhambisa umbala kutyelelo lwakho lwesibini. Uzisebenzisa njani ziya kuboniswa ngugqirha wakho wamazinyo. Ngamafutshane, inani elincinci lejeli lityhalelwa kunye nobude beetreyi zombini ngaphambi kokuba zilungiswe phezu kwamazinyo akho. Uninzi lwezigulana lufumana i-gel yeeveki ezimbini, eziyisebenzisa rhoqo ebusuku iiveki ezimbini, okanye de yaneliseke ziziphumo ezimhlophe. Ijeli eninzi iyafumaneka kugqirha wamazinyo wasekuhlaleni.
Ixabiso Ukuthelekiswa kweLaser Teeth Whitening eTurkey vs Amanye amazwe
iunited Kingdom eunited States Khanada Ostreliya Nyu Zilend ikarikuni
I- £ 400 I- £ 500 I- £ 650 I- £ 650 I- £ 700 I- £ 250
Uyabona ukuba amaxabiso emhlophe amazinyo e-laser phesheya aphindwe kumaxesha ama-3 abiza kakhulu kuneTurkey. Ngale ndlela, uya kuba ugcina imali eninzi, kodwa gcina engqondweni ukuba olunye unyango lwamazinyo olufana nokufakwa okanye veneers eTurkey lunokugcina amawaka emali.
Ngaba Laser amazinyo mhlophe Lixabiso kunye nomgangatho ophezulu Turkey?
Ewe, ngokubanzi. Oogqirha bamazinyo eTurkey baqeqeshwe kakuhle njengabo baseUnited States, belandela ucoceko kunye nemigaqo yokhuseleko eyamkelweyo kwilizwe liphela. Ezona klinikhi zethu zamazinyo zibalaseleyo eTurkey zisebenzisa izixhobo ezifanayo kunye nezinto ezisetyenziswa ngugqirha wamazinyo ekhaya.
Oko akuthethi ukuba akufuneki wenze olwakho uphando kwaye uqiniseke ukuba ikliniki oya kuyo ithembekile. Siyayiqonda loo nto ukwenza amazinyo akho abe mhlophe eTurkey Ngelixa kunzima eholideyini, ke sikwenze kwalula ukudibanisa ezona klinikhi zibalaseleyo eTurkey kwiimfuno zakho, uninzi lwazo lubekwe ngokufanelekileyo kufutshane nezokhenketho ezaziwayo njengeAntalya, Kusadasi, Izmir naseIstanbul.
Kutheni ndifanele ndikhethe iTurkey yeNkqubo yokuMhlophe kwamazinyo?
Unxweme olumangalisayo lwaseTurkey luyenzile indawo eyaziwayo yeholide kubakhenkethi baseBritane abafuna ilanga leMeditera. Kulabo banqwenela ukubona okuthe kratya kwikhefu labo, imbali yelizwe etyebileyo kunye nezinto zakudala ezivela kwiminyaka eyadlulayo zinomdla. I-Istanbul, esinye sezona zixeko zityelelweyo emhlabeni, ihlala iyintandokazi kwabaqhekezi bezixeko. Abantu abahamba elwandle baya kufumana ukhetho olungenasiphelo kunxweme lwaseTurkey iAegean, kunye namazinyo eAntalya, Izmir naseKusadasi. Nokuba yeyiphi na ikhefu olifunayo, iTurkey ingakunika ukhathalelo lwamazinyo oluphezulu kunye nokuphumla kunye nokuchacha.
Iinkcukacha zoqhagamshelwano Philisa ukuBhukisha ukufumana amazinyo laser efikelelekayo kakhulu mhlophe okanye naluphi na olunye unyango lwamazinyo ngexabiso eliphantsi ngesaphulelo esikhethekileyo ngokunjalo.
Yimalini ukufumana amazinyo amhlophe kwiIstanbul, Turkey?
Ukufakwa kwamazinyo kwangolo suku eTurkey
Zithini iiVeneers zamazinyo?
Ngaba izithsaba zamazinyo zingumbono olungileyo?
Konke ku-4 lonyango lokufaka amazinyo eTurkey
Yintoni umndilili weendleko zamakhonkco amazinyo eTurkey?
← Iindleko zokuMiliselwa kwamazinyo eMexico: Thelekisa iTurkey
Yimalini ukufumana amazinyo amhlophe kwiIstanbul, Turkey? →
Singakufumanela elona xabiso libalaseleyo kwiikliniki. Ukusukela ngomhla wokuqala kude kube lusuku lokugqibela sinokukuxhasa malunga nonyango lwakho. Bhala nje kwaye ufumane inkxaso yasimahla kuthi. Akukho ndleko ifihliweyo.
Kutheni uphilisa ukuBhukisha?
Ukunyanga kulapha ukuhlangabezana neemfuno zakho malunga nonyango lwamazinyo, ukufakelwa kweenwele, utyando lokulahleka kwesisindo, amathambo, i-aesthetics kunye nezintso kunye nokufakelwa kwesibindi eTurkey. Iiklinikhi zethu zenethiwekhi kunye nezibhedlele zibekwe eTurkey. Zonke zikhethekile kwicandelo labo kwaye oogqirha baneminyaka yamava. Siyinkampani yezokhenketho yezonyango e-Turkey yoNyango lwaMazinyo, ukuTshintshwa kweNwele, uPhando loPhononongo, iTyholwa kwamathambo, iAesthetics kunye nokuTyalwa komzimba.
Injongo yethu ephambili kukuqokelela abathengi kwihlabathi liphela ngoogqirha abagqwesileyo, iiklinikhi kunye nezibhedlele eTurkey. Sikwabonelela ngeenkonzo zonyango ngaphandle kwexesha, indawo kunye nohlahlo-lwabiwo mali.
Siyakholelwa ekubeni ukuba nenkululeko yokuphucula ukhathalelo lwempilo ngendlela nendawo ehambelana nabona baphumeleleyo yeyona nto ibalulekileyo. Yinjongo yethu ukubonelela ngeephakeji zenkonzo yezempilo eTurkey ukuze abathengi bethu baxhamle kunyango ngokudibanisa iholide yokuphumla eTurkey.
ICureBooking ikunika amaxabiso asemgangathweni kunyango lwakho olunikezelwa ngoogqirha kunye neeklinikhi eziphambili eTurkey. Kungenxa yoko le nto sicebisa ukuba ungathathi sigqibo ngaphandle kokufumana ikhowuti kuthi. Uya kufumana isicwangciso sonyango esicacisiweyo, esicacileyo nesilula kwiintsuku ezimbini zeshishini, ukuze wazi kakuhle ukuba ufumana ntoni ngaphandle kweendleko ezifihliweyo.
Sifuna ukukunceda ekwenzeni esona sigqibo sihle malunga nempilo yakho, inkathalo kunye neholide. Sinikezela ngenkonzo eyenziwe ngokwezifiso ukwenza ukuba uhambo lwakho lube lula ngakumbi, kubandakanya ukutshintshela kwisikhululo seenqwelomoya ukuya nokubuya kwindawo okhetha ukuhlala kuyo, kunye nomqhubi wabucala ukuya nokubuya kwiziko lonyango.
Kutheni le nto unyango kuTurkey?
I-Turkey ibisoloko isaziwa ngenkcubeko, imbali kunye nezinto zayo ezimangalisayo ezirhwebesha iindwendwe ezivela kwihlabathi liphela, kwaye kule minyaka ilishumi idlulileyo, ukhenketho lwezonyango lube sesinye isizathu sokuba amawaka abatyeleli baye kweli lizwe. I-Turkey yenye yezona ndawo zibalaseleyo kwezokhenketho kwezempilo. Izigulana ezivela kwihlabathi liphela ziya zisiza apha kwiinkonzo zonyango.
Urhulumente ukhuthaza ngenkuthalo ukhenketho lwempilo, ngezicwangciso zokufumana abaguli bamanye amazwe abazizigidi ezi-2 kunye nokuqokelela ngaphezulu kwe-20 yezigidigidi zedola ngo-2023. Ngokuphathelene noku, sele kwenziwe inkqubela ebonakalayo, nangaphezulu kwesigulana esingaphandle kwesigidi esinye esityelele izibhedlele zaseTurkey kunyaka ophelileyo.
I-Turkey iye yaba yindawo yezonyango kubakhenkethi abavela kwihlabathi liphela kule minyaka idlulileyo, enkosi kubuchwephesha obutsha kwicandelo lezempilo nakwiziko lonyango lobugcisa. Amaziko onyango kunye nezibhedlele ziye zawamkela amandla okhenketho lwempilo kwaye ziye zaba lukhetho olufanelekileyo kubahambi abafuna ukhetho lokhetho kumaziko abonelela ngendawo yokuhlala, amayeza afanelekileyo, amaxabiso afikelelekayo nokunye okuninzi.
Iindleko zoqhaqho lwe-Scoliosis eTurkey- Utyando lwee-Spine olufikelelekayo
Iindleko zoPhando lweSpine eTurkey- Utyando oluncinci lwe-Spine Surgery
Iindleko zokumamatheka kuSmall eIstanbul- iZiko laMazinyo laseIstanbul
Ukulungiswa kwamagxa ajikelezayo eTurkey- Iindleko kunye neNkqubo
Ngaba ndifanele ndifumane iHollywood Smile eIstanbul okanye eUK? Iindleko e-UK nase-Turkey
Unyango lwamazinyo Isikhokelo seTurkey
Copyright © 2021 Philisa ukuBhukisha. Onke Amalungelo Agciniwe.
Umxholo: UmbalaMag by UmxholoGrill. Ixhaswa ngu WordPress.
ukucaphula simahla kunyango